Hooyo carruurteeda kala soo baxsatay Britain oo lagu maxkamadeeyey Kanada – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Hooyo carruurteeda kala soo baxsatay Britain oo lagu maxkamadeeyey Kanada
Anisa Mohamed Ibrahim ayaa shalay la soo taagay Maxkamad ku taalla magaalladda Hamilton ee dalka Kanada, iyadoo ku eedeysan inay 5 sanno ka carruur labo carruur ay dhashay kala soo dhuumatay Aabahooda oo ku nool dalka Britain.
Boliska Kanada ayaa la sheegay inay Hooyadaasi iyo labadeeda wiil oo 10-jir iyo 8 jir ah heleen, iyagoo magac kale ku jooga dalka Kanada.
Jaalliyadda Soomaalida ku nool magaalladda Hamilton ayaa waxay shalay isugu soo urureen Maxkamadda, iyagoo taageero u muujinaya tallabada ay Hooyadaasi carruurteeda ugala soo qaxday dalka Britain.
Anisa Mohamed Ibrahim oo 35 jir ah ayaa lagu soo oogay labo Dembi, waxayna muteysan kartaa in iyada iyo carruurteeda dib loogu celiyo dalka Britain.
Sahra Farah oo ka mid ah dadkii shalay ku sugnaa Maxkamadda Degmadda Hamilton ayaa sheegtay inay taageersan yihiin Anisa Ibrahim, oo ay sheegtay inay tahay Hooyo Wanaagsan.
Sidoo kale, Soomaalida ku nool magaalladda Toronto ayaa taageero u muujiyey Hweeneydaasi oo shalay la soo taagay Maxkamadda, iyadoo uusan wax Garyaqaanah wehlinin.
Anisa waxaa dib loogu celiyey xabsiga Barton Jail, waxaana la filayaa in mar kale Maxkamadda Hamilton la soo taago bisha soo socota ee September 11-da.
Anisa Mohamed Ibrahim ayaa la sheegay inay iyada iyo labadeeda carruur ka soo ambabaxeen magaalladda Manchester ee dalka Britin bishii April ee sannadkii 2010-kii, kadib, markii ay kala tageen ninkeeda ay u hayso labada carruur.
Boliska magaalladda Toronto ee dalka Kanada ayaa la sheegay inay dhowr isbuuc ka hor gacanta ku dhigeen Haweeneydaasi iyo labadeeda carruur ah, kadib, markii Baaritaan Caalami lagu ogaaday inay si dhuumaalaysi ku joogto dalka Kanada.
Kalluumeysato Iiraaniyiin oo ka baxsatay dabley ku haysatay Xeebaha Somalia